Afrika, 31 May 2019
Khamiis 31 May 2019
Nairobi: Ciidamada oo galay xawaaladaha Soomaalida
Wararka ka imanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay gudaha u galeen qaar ka mid ah xafiisyada shirkaddaha xawaadaha Soomaalida ee ku yaalla xaafadda Islii.
Kenya oo dal ku gal u diidey mas'uuliyiin Soomaali ah
Dowladda Kenya ayaa dal ku gal u diidey xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaalaiya, kuwas oo muddo saacado ah ku xannibnaa garoon ku yaalla Kenya, sida ay ila wareedyo u sheegeen VOA.
Abiy oo qabtay casho lagu gelayey $173,000
Maal-qabeenno Itoobiyaan ah ayaa bixiyey 173,000 oo dollar midkiiba, si ay uga qeyb galeen casho uu sameeyey ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo lacag loogu ururinayey qurxinta magaalada caasimadda ah ee Addis-Ababa, sida ay werisay warbaahinta dowladda.
Madaxweyne Zuma oo maxkamad lasoo taagay
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Jacob Zuma ayaa maanta maxkamad lasoo taagay isaga oo u dagaalamaya in eedeymo musuq maasuq oo ka dhan ah la baabi’iyo.
QM oo Cambaareysay Dil Mali Loogu Geystay Ciidanka Nabad Ilaalinta
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay weeraro dhawaan dalka Mali loogu geystay ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta QM ee dalkaasi ka howlgala.
Shir ku saabsan xagjirnimada oo ka socda Nairobi